Ukulungiselela i-IELTS - Isikole soLimi se-BLI eCanada
UKULUNGISELELA UVIVIYOISIQINISEKISO SE-IELTS
Finyelela impumelelo ekuhlolweni kwe-IELTS ngemiyalo nokuzilolonga okuqondiswa
UKULUNGISELELA UVIVIYOIQHAWU LOKULUNGISELELA I-IELTS
I-ELTS ukuhlolwa okwaziwa kakhulu kokulinganisa ulimi lwesiNgisi emhlabeni wonke kwabafundi bezemfundo, abokufika kanye nezinjongo zobungcweti.
Inkambo yokulungiselela ukuhlolwa kwe-BLI IELTS izokusiza ukuthi uthuthukise ukusetshenziswa kwakho kwesiNgisi ngenkathi ikusiza futhi ukufeza umphumela ongcono wokuhlolwa kwe-IELTS.
I-IELTS yamukelwa njengobufakazi bendaba yolimi lwesiNgisi yokutadisha, umsebenzi kanye nokufuduka. Ukuhlolwa kwe-IELTS kuqashelwa yinani elikhulu lamanyuvesi aseBrithani, Canada, Australia, Malta naseNingizimu Afrika, futhi ezimeni eziningi, izikhungo zemfundo zaseMelika.
Inkambo yokulungiselela ukuhlolwa kwe-BLI IELTS ihloselwe ukukusiza ulungiselele amamojuli amane wokuhlolwa kwe-IELTS ngenkathi futhi esiza abafundi ukuba bathuthukise ukusetshenziswa kwabo okujwayelekile kwesiNgisi. Amakilasi enzelwe ukugxila ekuthuthukiseni ikhono lolimi ngalunye (ukufunda, ukulalela, ukukhuluma, ukubhala) ngenkathi futhi kunikeza abafundi imiyalo yansuku zonke nethuba lokuzijwayeza amasu namasu abalulekile.